Ulawulo lomgangatho-iWuling (Fuzhou) Biotechnology Co., Ltd.
E-Wuling, inqununu yokuqala kuzo zonke iimveliso esizivelisayo kukuba zenziwe kuphela ngomzimba weziqhamo weMushroom njengoko oku ubuninzi bezinto ezisebenzayo zinjalo.
Ngawo onke amanqaku kwimveliso sibeka iliso kwimveliso yethu kumanqanaba ezinto ezifanelekileyo ezisebenzayo ukuze ube nakho ukungaguquguquki kunye nokuphakama kwesiseko sezinto ezinamandla okanye imveliso egqityiweyo kuthi.
Nguye kuphela umzi-mveliso ehlabathini osebenzisa indlela enegunya lobunikazi yeJuncao yokulima iReishi, engesosandi sodwa sendalo kuphela kodwa esinezithako ezisebenzayo ngakumbi kuneReishi esele ikhulile.
Siqinisekisiwe nge-ISO 22000 kwaye sinokubonelela ngeengxelo zovavanyo lwe-SGS njengoko kufuneka.
Yonke i-odolo yamakhowa esiyivelisayo iyavavanywa kwizitshabalalisi, izinyithi ezinzima kunye nezinto ezisebenzayo kunye nomxholo webhaktiriya kwaye kufuneka ithobele imigangatho karhulumente evunyiweyo ukuze ikwazi ukuhambisa.
Kuwo onke amanqanaba ukusuka kwifama ukuya kwimveliso egqityiweyo sithatha umgangatho, ukhuseleko kunye nokuhambelana ukuya kumanqanaba aphezulu ukuze uqiniseke ukuba ufumana okungcono kubasebenzisi bakho bokugqibela.
Umgangatho wethu uvela kukhetho olunenkcukacha kunye nemigangatho engqongqo yezinto ezisetyenzisiweyo esizisebenzisayo kunye neendlela ezilungileyo zokulima.
Isiseko sethu sokutyala sendalo sisezantsi kweNtaba yeWuyi, egubungela indawo emalunga ne-800 mu. Intaba ye-Wuyi yenye yezona ndawo zigcina indalo eTshayina, apho umoya ococekileyo ucocekileyo kwaye ungenalo ungcoliseko olungelulo kwaye ulunge kakhulu ekukhuleni kwamakhowa amayeza. Sisebenzisa iintlobo ezikumgangatho ophezulu kwaye sikhetha indawo engangcolisiyo inkcubeko kwaye silandele ngokungqongqo imigaqo yokutyala ye-GAP kunye nemilinganiselo ye-US / EU ngexesha lokukhula kwamakhowa. Asisebenzisi naziphi na izichumisi zemichiza okanye izibulali zinambuzane kwaye sineemfuno ezingqongqo kakhulu kumgangatho wamanzi ukuqinisekisa amakhowa akumgangatho ophezulu ngaphandle kwezitshabalalisi okanye intsalela yentsimbi enzima.
Umoya wobugcisa ukhokela inkqubo yokukhutshwa kwamakhowa.
Kule minyaka ili-17 idlulileyo, ukuze silandele iimveliso ezingcono, siye saqhubeka siphucula umgca wemveliso kwaye salungiselela inkqubo yezobuchwepheshe. Umzi-mveliso wethu wokulungisa nzulu ugubungela indawo ephantse ibe zii-20,000 zeemitha zesikwere, kwaye inothotho lokomisa kunye neendawo zokugaya ii-mushroom, izixhobo zethu zokulungisa kunye nokukhupha, iindibano zocweyo zokulungiselela ukutya zonke ziyahlangabezana nemigangatho ye-ISO22000 kwaye zihambelana nemigangatho ye-GMP. Sinokubonelela abathengi ngobuninzi beekhowa ezomileyo kunye neziqhelekileyo, umgubo ocoliweyo we-mushroom wee-meshes ezahlukeneyo, sinokuvelisa i-mushroom polysaccharides kunye ne-beta glucan enoluhlu lwe-10% ukuya kwi-95% yesithako esisebenzayo, kuxhomekeke kwiimfuno zakho, sinokubonelela iimveliso ezinomxholo omnye kunye nomxholo ophezulu we-cordycepin (isithako esisebenzayo kwi-cordycept) kunye neHericium (isithako esisebenzayo kwimane yeNgonyama) njl.